မွနျမာ ဘျောလုံးပှဲကရသော သငျခနျးစာမြား – Sunthit Myanmar
မွနျမာရတယျ ၊မွနျမာယူလာတယျ…၊ ဂိုးရှကေို့ ဖွတျပေးလိုကျတယျ….ပငျနငျလျတီဧရိယာ အစကိုရောကျလာပွီ…. ……ကနျလိုကျပွီ…ကနျခကျြက အနညျးငယျလှဲသှားတယျခငျဗြာ…။
မနညေ့နေ(၆)နာရီက အစပွုခဲ့တဲ့ မွနျမာနဲ့ အိန်ဒိယတို့ရဲ့ အာရှဖလားခွစေဈပှဲ ကွငွော တငျဆကျသူထံက ထှကျလာတဲ့အသံပါ။ မနကေ့ ဆိုရငျ ဒီအသံမြိုး ဆယျမိနဈ ဆယျ့ငါးမိနဈ တဈကွိမျမက ခဏခဏကို ကွားနရေတဲ့အသံပါ။ ဟုတျပါတယျ။ မနကေ့ဆိုရငျ မွနျမာအသငျးက တဈခြိနျလုံး တိုကျစဈဆငျပွီး ဂိုးရဖို့ ကွိုးစားနခေဲ့ပွီး အိန်ဒိယအသငျးကတော့ အိမျရှငျပရိတျသတျရှမှေ့ာ တဈခကျြတဈခကျြသာ ထိုးဖောကျကစားပွီးဂိုးရဖို့ကွိုးစားနိုငျခဲ့တာ ကွညျ့မိလိုကျတဲ့ ဘျောလုံး ပရိတျသတျတိုငျးသိကွပါတယျ။
ကြှနျတျောက ဘျောလုံးပှဲဆိုတာနဲ့ ထမငျးမဟေ့ငျးမေ့ အားပေးနကေပြါ။ မွနျမာဘျောလုံးပှဲတဈပှဲကွညျ့ပွီးတိုငျး အသကျရှုမဝတာ၊ နှလုံးခုနျမွနျပွီး စိတျတိုစိတျဆတျတာ၊ ဒေါသထှကျတာ၊ အျောငေါကျတာတှေ ပိုမြားလာတာပဲ အဖတျတငျပါတယျ။ပရိတျသတျတှလေညျး ဒီအတိုငျးပဲဖွဈမယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။
ပှဲခငျးထဲက တဈခြို့ပရိတျသတျတှဆေို စိတျမထိနျးနိုငျလို့ မွနျမာဘျောလုံးအဖှဲ့ခြုပျလညျး ဒဏျရိုကျခံထိခဲ့တာတောငျ ကွားဖူးပါရဲ့။ ဘျောလုံးပှဲကွိုကျတဲ့ ကြှနျတျောလညျး မနကေ့ဘျောလုံးပှဲကိုကွညျ့ရငျး ဒေါသတှေ၊ အလိုမကမြှုတှေ၊ အားမလိုအားမရဖွဈတာတှကေနေ ဘဝသငျခနျးစာတှေ ရလိုကျပါတယျ။
တကယျတော့ ဘျောလုံးပှဲတဈပှဲဟာ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ဘဝတဈခုလိုပါပဲ။ အခြိနျ အကနျ့အသတျနဲ့ ပွိုငျဆိုငျရတယျ။ စှမျးအားတှသေုံးရတယျ။ စှမျးရညျတှသေုံးရတယျ။ ဉာဏျရညျတှသေုံးရတယျ။ အပူးအပေါငျး အခြိတျအဆကျတှနေဲ့ စုပေါငျးလုပျဆောငျရတယျ။ တိကတြဲ့ပနျးတိုငျတဈခုကို ထိအောငျဝိုငျးလုပျနိုငျပါမှ အောငျပှဲရတဲ့ ပွိုငျပှဲမြိုးဖွဈတယျ။ မွနျမာဘျောလုံးအသငျးဟာ မနကေ့ အတေျာ့ကိုကွိုးစားခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကနျခကျြကအနညျးငယျလှဲသှားတာတို့ အပေးအယူမြားသှားတာတို့၊ နညျးသှားတာတို့က ကွိုးစားခဲ့တာတှအေားလုံးကို သဲထဲရသှေနျဖွဈသှားစတောပါပဲ။
အခြုပျကိုပွောရရငျတော့ နောကျဆုံးအခြိနျစက်ကနျ့ပိုငျးထိ အဆုံးသတျ၊အပွီးသတျဟာ အတေျာ့ကို အရေးကွီးပါတယျ။ ရလာတဲ့အခှငျ့အရေးဆိုတဲ့ အခိုကျအတနျ့ ကာလလေးတဈခုကို အကြိုးရှိရှိ အသုံးခနြိုငျတဲ့ အခှငျ့အရေးကလညျး နှဈဘကျအသငျးအတှကျရှိနတောပါပဲ။ ကြှနျတျောတို့ဘဝမှလညျး အခှငျ့အရေးပေးတဲ့ ခဏမှာ ဒီအခှငျ့အရေးကို မခိုမကပျ အကြိုးရှိရှိအသုံးခနြိုငျဖို့က အငျမတနျအရေးကွီးပါတယျ။
အကြိုးရလဒျကို အာရုံစိုကျပွီး ဘယျလောကျပငျ ကွိုးစားပမေယျ့ ကြှမျးကငျြမှုနဲ့ ဉာဏျရညျထပျပေါငျးပါမှ ဂိုးဆိုတဲ့ပနျးတိုငျကို အရယူနိုငျမှာပါ။ ပရိတျသတျကွီးက မွနျမာနိုငျမယျဆိုတဲ့ စိတျနဲ့ ယုံကွညျစိတျခစြှာအားပေးခငျြလှပါပွီ။ မွနျမာဘျောလုံးအသငျးဟာ ဂရပျတဈခုနဲ့နှိုငျးယှဉျပွောရရငျ အတကျအကကြွမျးတဲ့ သဘောမှာရှိပါတယျ။
အထူးသဖွငျ့နိုငျနရေငျးနဲ့ ဖတျြကနဲ ပွနျရှုံးသှားတတျပါတယျ။ အားကစားမွှငျ့တငျခွငျးဟာ တိုငျးပွညျရဲ့ဂုဏျကိုမွှငျ့တငျခွငျးလို့ဆိုတဲ့ အတှကျ လောလောဆယျ ကမ်ဘာမလှမျးရငျနပေါစေ၊ အာရှမှာ နိုငျငံဂုဏျကိုဆောငျနိုငျမယျ့ တညျငွိမျပွီး အမြားလေးစားအထငျကွီးတဲ့ အသငျးတဈခုဖွဈရငျပဲကနြေပျပါတယျ။
ဘယျလိုပငျ မွနျမာအသငျးရှုးံခဲ့ပမေယျ့ သူပေးသှားခဲ့တဲ့ ဘဝသငျခနျးစာတှကေတော့ မြားလှပါတယျ။ မွနျမာဘျောလုံးအသငျးအမွနျဆုံးတိုးတကျပါစဟေု ဆုတောငျးလကျြ။
Zawgyi font : မြန်မာ ဘော်လုံးပွဲကရသော သင်ခန်းစာများ
မြန်မာရတယ် ၊မြန်မာယူလာတယ်…၊ ဂိုးရှေ့ကို ဖြတ်ပေးလိုက်တယ်….ပင်နင်လ်တီဧရိယာ အစကိုရောက်လာပြီ…. ……ကန်လိုက်ပြီ…ကန်ချက်က အနည်းငယ်လွဲသွားတယ်ခင်ဗျာ…။
မနေ့ညနေ(၆)နာရီက အစပြုခဲ့တဲ့ မြန်မာနဲ့ အိန္ဒိယတို့ရဲ့ အာရှဖလားခြေစစ်ပွဲ ကြေငြာ တင်ဆက်သူထံက ထွက်လာတဲ့အသံပါ။ မနေ့က ဆိုရင် ဒီအသံမျိုး ဆယ်မိနစ် ဆယ့်ငါးမိနစ် တစ်ကြိမ်မက ခဏခဏကို ကြားနေရတဲ့အသံပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။ မနေ့ကဆိုရင် မြန်မာအသင်းက တစ်ချိန်လုံး တိုက်စစ်ဆင်ပြီး ဂိုးရဖို့ ကြိုးစားနေခဲ့ပြီး အိန္ဒိယအသင်းကတော့ အိမ်ရှင်ပရိတ်သတ်ရှေ့မှာ တစ်ချက်တစ်ချက်သာ ထိုးဖောက်ကစားပြီးဂိုးရဖို့ကြိုးစားနိုင်ခဲ့တာ ကြည့်မိလိုက်တဲ့ ဘော်လုံး ပရိတ်သတ်တိုင်းသိကြပါတယ်။
ကျွန်တော်က ဘော်လုံးပွဲဆိုတာနဲ့ ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့ အားပေးနေကျပါ။ မြန်မာဘော်လုံးပွဲတစ်ပွဲကြည့်ပြီးတိုင်း အသက်ရှုမဝတာ၊ နှလုံးခုန်မြန်ပြီး စိတ်တိုစိတ်ဆတ်တာ၊ ဒေါသထွက်တာ၊ အော်ငေါက်တာတွေ ပိုများလာတာပဲ အဖတ်တင်ပါတယ်။ပရိတ်သတ်တွေလည်း ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ပွဲခင်းထဲက တစ်ချို့ပရိတ်သတ်တွေဆို စိတ်မထိန်းနိုင်လို့ မြန်မာဘော်လုံးအဖွဲ့ချုပ်လည်း ဒဏ်ရိုက်ခံထိခဲ့တာတောင် ကြားဖူးပါရဲ့။ ဘော်လုံးပွဲကြိုက်တဲ့ ကျွန်တော်လည်း မနေ့ကဘော်လုံးပွဲကိုကြည့်ရင်း ဒေါသတွေ၊ အလိုမကျမှုတွေ၊ အားမလိုအားမရဖြစ်တာတွေကနေ ဘဝသင်ခန်းစာတွေ ရလိုက်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဘော်လုံးပွဲတစ်ပွဲဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘဝတစ်ခုလိုပါပဲ။ အချိန် အကန့်အသတ်နဲ့ ပြိုင်ဆိုင်ရတယ်။ စွမ်းအားတွေသုံးရတယ်။ စွမ်းရည်တွေသုံးရတယ်။ ဉာဏ်ရည်တွေသုံးရတယ်။ အပူးအပေါင်း အချိတ်အဆက်တွေနဲ့ စုပေါင်းလုပ်ဆောင်ရတယ်။ တိကျတဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခုကို ထိအောင်ဝိုင်းလုပ်နိုင်ပါမှ အောင်ပွဲရတဲ့ ပြိုင်ပွဲမျိုးဖြစ်တယ်။ မြန်မာဘော်လုံးအသင်းဟာ မနေ့က အတော့်ကိုကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကန်ချက်ကအနည်းငယ်လွဲသွားတာတို့ အပေးအယူများသွားတာတို့၊ နည်းသွားတာတို့က ကြိုးစားခဲ့တာတွေအားလုံးကို သဲထဲရေသွန်ဖြစ်သွားစေတာပါပဲ။
အချုပ်ကိုပြောရရင်တော့ နောက်ဆုံးအချိန်စက္ကန့်ပိုင်းထိ အဆုံးသတ်၊အပြီးသတ်ဟာ အတော့်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ ရလာတဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ အခိုက်အတန့် ကာလလေးတစ်ခုကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးကလည်း နှစ်ဘက်အသင်းအတွက်ရှိနေတာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဘဝမှလည်း အခွင့်အရေးပေးတဲ့ ခဏမှာ ဒီအခွင့်အရေးကို မခိုမကပ် အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်ဖို့က အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။
အကျိုးရလဒ်ကို အာရုံစိုက်ပြီး ဘယ်လောက်ပင် ကြိုးစားပေမယ့် ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ ဉာဏ်ရည်ထပ်ပေါင်းပါမှ ဂိုးဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကို အရယူနိုင်မှာပါ။ ပရိတ်သတ်ကြီးက မြန်မာနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာအားပေးချင်လှပါပြီ။ မြန်မာဘော်လုံးအသင်းဟာ ဂရပ်တစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြောရရင် အတက်အကျကြမ်းတဲ့ သဘောမှာရှိပါတယ်။
အထူးသဖြင့်နိုင်နေရင်းနဲ့ ဖျတ်ကနဲ ပြန်ရှုံးသွားတတ်ပါတယ်။ အားကစားမြှင့်တင်ခြင်းဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ဂုဏ်ကိုမြှင့်တင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ အတွက် လောလောဆယ် ကမ္ဘာမလွှမ်းရင်နေပါစေ၊ အာရှမှာ နိုင်ငံဂုဏ်ကိုဆောင်နိုင်မယ့် တည်ငြိမ်ပြီး အများလေးစားအထင်ကြီးတဲ့ အသင်းတစ်ခုဖြစ်ရင်ပဲကျေနပ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုပင် မြန်မာအသင်းရှုးံခဲ့ပေမယ့် သူပေးသွားခဲ့တဲ့ ဘဝသင်ခန်းစာတွေကတော့ များလှပါတယ်။ မြန်မာဘော်လုံးအသင်းအမြန်ဆုံးတိုးတက်ပါစေဟု ဆုတောင်းလျက်။
Published March 29, 2017 By sanwintun